Ahoana ny fomba famonosana data avy amin'ny tranonkala iray amin'ny Python & BeautifulSoup? - Ny valin'ny fanontaniana
A web scrap ing extracts data and presents it in endriny iray miavaka mba hanampiana ireo mpikaroka web ho tonga amin'ny valiny ilainy. Manana fampiharana marobe amin'ny tsena ara-bola izy io, saingy azo ampiasaina amin'ny toe-javatra hafa. Ohatra, ny mpampiasa dia mampiasa izany mba hampitaha ny vidin'ny vokatra samihafa.
Web fanalana amin'ny Python
Python dia fiteny iray fandaharam-pampianarana manana fehezan-teny mahavariana sy code. Izy io dia mifanaraka na dia ireo mpirotsaka an-tsehatra aza noho ny safidy maro isan-karazany azony. Ankoatra izany, Python dia mampiasa tranomboky miavaka antsoina hoe Supper Beautiful. Ny tranonkala dia nosoratana tamin'ny alàlan'ny HTML, izay mahatonga ny tranonkala tahirin-tsary iray. Na izany aza, mila mahatsiaro ireo mpampiasa fa ny tranonkala isan-karazany dia tsy manome foana ny votoatiny amin'ny format malalaka. Vokatr'izany dia toy ny safidy mahomby sy ilaina ny fanalana ny tranokala. Raha ny marina dia manome fahafahana ny mpampiasa hanao zavatra isan-karazany izay nampiasainy tamin'ny Microsoft Word izy ireo.
LXML dia tranomboky lehibe izay azo ampiasaina hanaparitaka haingana ny tahiry HTML sy XML. Raha ny marina, ny tranokala LXML dia manome fahafahana ny mpikaroka tranonkala mba hahatonga ny rafitra hazo izay azo takarina mora foana amin'ny fampiasana XPath. Ary indrindra indrindra, XPath dia ahitana ny fampahalalana ilaina. Ohatra, raha te hampiasa ny lohatenin'ny toerana sasantsasany ny mpampiasa, dia ilainy aloha ny mamaritra ny singa HTML misy azy.
Ny famoronana Codes
Mety ho sarotra ny manoratra ny codec. Amin'ny tenim-pandrindrana, ny mpampiasa dia tsy maintsy manoratra na dia ny singa fototra indrindra aza. Ho an'ny asa fanampiny kokoa, ny mpikaroka web dia tsy maintsy mamorona ny rafitra misy azy manokana. Na dia izany aza dia mety ho fanampiana lehibe ho azy ireo i Python, satria rehefa ampiasaina izany dia tsy voatery mamaritra ny rafitry ny angona izy ireo, satria ity fitaovana ity dia manolotra fitaovana tsy manam-paharoa ho an'ireo mpampiasa azy hanao ny asany.
Mba hanakanana pejy iray manontolo dia mila maka azy amin'ny alalan'ny famandrihana Python fangatahana izy. Vokatr'izany, ny tranomboky fangatahana dia hamoaka downloada HTML avy amin'ny pejy sasany. Ireo mpikaroka ao amin'ny tranonkala dia mila mahatsiaro fotsiny fa misy karazana fangatahana isan-karazany.
Fitsipika fanindroany (Python)
Alohan'ny fandefasana ireo tranonkala, mila mamaky ny pejy Terms and Conditions ny mpiserasera mba hisorohana olana ara-dalàna amin'ny hoavy. Ohatra, tsy dia tsara ny mangataka fangatahana loatra amin'ny angon-drakitra. Izy ireo dia mila manao antoka fa ny fandaharan'izy ireo dia miova tahaka ny maha-olombelona. Ny fangatahana pejy iray isaky ny faharoa dia safidy lehibe.
Rehefa mitsidika toeram-pamakiana samihafa ireo mpikaroka web dia tsy maintsy mijery ny vakinteny satria miova tsindraindray. Noho izany, mila mamerina mitsidika ilay tranonkala iray ihany izy ireo ary manoratra ny codeo raha ilaina.
Mety ho asa sarotra ny fitadiavana sy fanalana data avy amin'ny aterineto ary ny Python dia afaka manao ity dingana ity ho tsotra toy ny mety Source .